हिरोहरुले मज्जैले मनाए युरोपमा ‘भ्याकेशन’,थ्याङ्क्यु ‘एलसी–२’ ! - Super Hit News
हिरोहरुले मज्जैले मनाए युरोपमा ‘भ्याकेशन’,थ्याङ्क्यु ‘एलसी–२’ !
यसपालि दयाहाङ राई, अनुपबिक्रम शाही, सौगात मल्ल,अर्पण थापालगायतका चर्चित अनि ब्यस्त अभिनेताहरुले एकसाथ युरोप टुर गरेका छन् । सँधै ब्यस्त रहने यी अभिनेतालाई यस्तो संयोग बिरलै मिल्ने गर्दछ । कुनै ठूलै कार्यक्रममा सहभागी हुन जादा पनि कार्यक्रमकै तनाव हुन्छ । सुटिङका लागि जादा सुटिङकै चटारो भइहाल्यो । आरामसँग कहिले घुम्नू ?
तर पाली भने मज्जैले मौका मिल्यो । उनीहरुले बेल्जियममा निकै मस्ती गरे । न सुटिङको टेन्सन, न डबिङ न त प्रचारप्रशारमा खटिनुपर्ने झन्झट । झण्डै दुई साता उनीहरु बिभिन्न ठाउँमा घुमें । खानपीन र म्यारिज त चल्ने नै भयो । यी ‘स्टार’ लाई यो सुवर्ण अबसर मिलाइदिएको हो, लप्पन–छप्पन–२ का निर्माता तथा निर्देशकले ।
०७३ को चैत्र दोश्रो साता प्रदर्शन भएको लप्पन छप्पन फिल्म पनि युरोपका बिभिन्न भूभागमा खिचिएको थियो । दयाहाङ,सौगात,अर्पणलगायतका कलाकार अभिनीत हुदा समेत यो फिल्मले बक्स अफिसमा कमाल देखाउन भने सकेको थिएन । तर, यो फिल्मका निर्देशक मुकुन्द भट्ट र केही निर्माताले भने लप्पन–छप्पन सुपरहिट भएको दावी गर्दै आइरहेका थिए । उनीहरुको यो झुटो दावीले झण्डै तीन बर्षपछि सिक्वेल अर्थात् लप्पन–छप्पन–२ जन्माइउदैछ । पहिला पनि युरोपमा खिचीएको, अहिले ताल परे अमेरिकामा खिच्नु पर्ने हो, तर पनि युरोप बेगर त सुटिङ पनि कसरी गर्नू के ! ‘रेपुटेशन’ को सवाल जो छ ।
काठमाडौमा सुटिङ सुरु गर्दैै आर्थिक संकटमा परेको लप्पन–छप्पन–२ को ले जसोतसो युरोपको यात्रा त तय गर्यो तर बिना क्यामेरा र बिना क्यामेराम्यान । पहिला पक्का गरेका निर्माता मध्येले पैसा ननिकालेकाले युनीट युरोपसम्म त पुग्यो तर सुटिङ भने कत्ति पनि भएन । निर्माण पक्षले कलाकार युरोप उड्ने बिहान अर्थात् साउन २० गते (अगस्त ५) सम्म क्यामेरा र क्यामेराम्यान खोज्दै थियो । त्यो पनि उधारोमा । तर, कुनै प्रोडक्शन हाउसले पनि उधारोमा क्यामेरा दिन नमानेपछि ‘उतै मिलाउला’ भन्दै टोली उडेको थियो ।
उता कता मिलाउनू ? सुटिङ गर्ने भनेर गएका कलाकार तथा प्राबिधिक एक सट नखिचाइ फर्कीनू पर्यो । सिनेमाटोग्राफर पुरुषोत्तम प्रधान चाहिँ आर्थिक कुरो नमिलेकाले युरोप उडेनन् । युनीटले ‘क्यामेराम्यान पनि उतै म्यानेज गरौला’ भनेर उडेको थियो । उता न क्यामेरा मिल्यो, न क्यामेराम्यान । यद्यपी, द्धन्द्ध निर्देशक हिमाल केसीले भने ठूलो क्यामेरा नभए पनि सानो क्यामेराले भने केही ‘मोन्टाज’ खिचेर फर्कीएको बताउने गरेका छन् । अरु सिन नखिचेपछि त्यो ‘मोन्टाज’ कहाँ हाल्नू ? फेरि फिल्म खिच्ने क्यामेरा र त्यो सानो क्यामेराको क्वालिटी कसरी मिल्नू ? युरोप टुर रेकर्डका लागि मोबाइलको प्रयोग भने प्रचुर मात्रामा गरिएको चाहिँ ‘युरोपवाला’ कलाकार, प्राबिधिकको फेसबुक हेर्दा प्रष्ट हुन्छ ।
नाम झै अब लप्पन–छप्पन २ को युरोपमा कहिले सुटिङ होला ? त्यो भने यसै ठोकूवा गर्न मिल्दैन हजुर । तर, जे होस्, बलिउड, हलिउडतिरका मिडियाले लेख्ने गरेको झै, यसपाली दयाहाङ,सौगात,अर्पण,अनुपबिक्रमजस्ता ‘स्टार’ ले ‘भ्याकेशन’ चाहिँ मज्जैले मनाए–‘एलसी–२’ को नाममा । त्यत्रो दिन यत्तिका कलाकार तथा प्राबिधिकलाई पाल्नु पर्दा चाहिँ ‘स्थानीय प्रोडयुसर’ को हालत कस्तो भए होला, यतातिर भने निर्देशकले ध्यान दिने हो की !
Tags: Anup Bikram Shahi, Arpan Thapa, Dayahang Rai, Himal Kc, Lappan Chhappan, Saugat Malla
Previous पत्याउलान् त दर्शकले नम्रताको एक्शन ?
Next मिस ब्युटी फूल– प्रकृति, मिसेस नेपाल आइडल– सोभिता